33 Sargaal oo Tababar loo soo xiray – Radio Muqdisho
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa maanta tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho gaar ahaan xerada tababarada ciidanka ee Jasiira.
tababarkaan oo socday muddo saddex iyo toban cisho ah ayaa ciidanka xoogga waxaa lagu barayey howllo la xiriira shaqadooda ,6 Usbuuc ayaa ciidanka qaar waxa ay qaateen koorso la xiriirta gargaarka deg dega ah, halka todobaadna ay qeyb kale oo ciidamada xoogga ay qateen habka goobta dagaalka.
Munaasabadii tababarka loogu soo xiray saraakiishan ayaa waxaa ka qeybgalay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya, saraakiisha howlgalka Midowga Yurub ee tababarka Ciidanka xoogga , AMISOM iyo saraakiisha qeybaha hoggaanada Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya.
Saraakiisha tababarka loo soo xiray oo gaarayey 33 sargaal ayaa waxaa ay si dhuulo tus ah u soo bandhigeen qaar kamid ah waxyaabihii ay ku barteen Koorsooyinkan ay qaateen muddada tababarka uu u socday.
Brigadier General Massimo Mingiardi Taliyaha howlgalka Midowga Yurub ee tababarka Ciidanka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in Midowga Yurub 1,200 oo askari ay Soomaaliya u tababareen sanadkan sii dhamaanaya, isagoo sidoo kale balan qaaday in sanadka soo socoda ay qalabeyn doonaan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u mahadceliyay Midowga Yurub kaalinta ay ka qaadanayaan tababarka iyo qalabeynta Ciidanka Xoogga, waxaana uu saraakiisha tababarka dhameystay ku adkeeyay in ay ka faa’ideeystaan xirfadihii ay barteen
Intaas ka dib waxaa Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha qeybaha Hoggaanada Ciidanka xoogga ay u soo dhaqaaqeen dhanka Xerada Afasiyoone oo ah saldhigga Ciidanka cirka oo ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka, halkaas oo ay ku taalo xerada 59aad gaadiidka Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya, waxaana ku soo dhoweeyay saraakiisha xeradaasi, iyadoo ay ku diyaarsanaayeen 150 askari oo la barayo farsamada gaadiidka iyo kaxeyntooda.
Janaraal C/qaadir Macalin Nuur Abaanduulaha Hoggaanka Taakuleynta Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyay Taliyaha dib u soo nooleynta xerada gaadiidka 59aad ee Ciidanka Xoogga dalka taas oo hadda dib loo soo nooleeyay tababarna uu hadda ka socdo.
Waddada Hanti Wadaag ee degmada Warta Nabadda oo dib u dhis lagu sameynayo “SAWIRRO”